ပြင်သင့်မပြင်သင့်(အစဉ်အလာခြံဝန်း ထဲက ထွက်သင့် ….မထွက်သင့်)-၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ပြင်သင့်မပြင်သင့်(အစဉ်အလာခြံဝန်း ထဲက ထွက်သင့် ….မထွက်သင့်)-၁
ပြင်သင့်မပြင်သင့်(အစဉ်အလာခြံဝန်း ထဲက ထွက်သင့် ….မထွက်သင့်)-၁
Posted by naywoon ni on Dec 14, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary |5comments
ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေကိုက ပုံပြင်တွေ ဒဏ္ဍာရီတွေနဲ့ ခွဲခြားလို့ မရတာပါလို့ ဆရာကြီးယောက်က (ဒေါက်တာသန်းထွန်းနဲ့ တူရဲ့ )ပြောဖူးတာမှတ်သားမိဖူးတယ်..။ သမိုင်းဆိုတာလည်း ပုံပြင်ဆန်ဆန် ဒဏ္ဍာရီလိုလို ပါးစပ်ရာဇ၀င်တွေလည်း အများသား….။ ဘိုးဘွားဘီဘင် တွေရဲ့ လက်ထက်မှာကိုက ပုံပြောကောင်းသော လူမျိုး အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ကြသည်ကိုးးး။ ပြီးတော့ စကားပုံနဲ့ ဥပမာ ခိုင်းနှိုင်းရာမှာလည်း ချက်နဲ့ လက်နဲ့ ပြောတတ်ကြပါပေရဲ့…။ ရှေးရှေးက သင်္ဂဇာ ဆရာတော် တို့ ဗန်းမော် ဆရာတော်တို့ ထင်ရှားလှပါ၏။ ပါဋိ ပါဒ်သားမပါပဲ ရိုးရိုးလေး ပုံပြင်ပြောသလိုပြောသွား ဟောသွားနိုင်လှပါပေ၏။ ဥပမာမြောက်အောင် စကားပုံတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြီး ပြောသွားလိုက်ပုံများ ဆယ့်ကိုးရာစုက ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာတောင် မယုံချင်စရာ….။ ထိုထို ဆရာတော်များနှင့် ခိုင်းနှိုင်းပြီး လိုက်လံ တုပ ပြောနိုင်သူတို့ကားများစွ…။ ဘာလို့လဲဆို ရှေ့က တစ်ယောက်က စပြီးလုပ်သွားတဲ့ အလုပ်အောင်မြင်သွားရင် နောက်က လိုက်လုပ်ကြမယ်သူတွေ ရိုက်သတ်မကုန်နိုင်သော မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ရှိရင်းစွဲ မပြင်နိုင်သော စရိုက်လက္ခဏာ အတိုင်း ရှေ့က လူက ဟိုဒင်းစားရင်တောင် လိုက်စားမဲ့သူက မရှား …။ ဒီတော့ကာ ဒီလိုပြောလို့ နာမယ်ကြီးရင် ဟိုလိုပြောင်းမပြောတတ်ကြတော့ဘူးပေါ့…။ ဒီလိုပြောတတ်မှပဲ လူရာဝင်တယ်…။ ပညာယှိ အဖြစ် စာရင်းသွင်းကြတယ်…။ အဲဒိတော့ ဘာသာ စကားတစ်ခု အစဉ်အလာတစ်ခုဟာ ခေါက်ရိုးကျ သွားပြီး သေသွားတာမဆန်းပါဘူး…..နော့…။ သို့ဂလို အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းထားတာဆိုလေတော့…… ပုံစံခွက်ကျပြီးသား ခေါက်ရိုးကျိုးပြီးသား ကြီးဟာကို ပြင်ပြင် ပြောင်းလဲခြင်းငှာ အဘယ်သူစွမ်းပါမည်နည်းး……………။ နော့
လက်တွေ့ကျတာ မကျတာ အသာထားဦး …..။ လက်နာသည်မလိုက်နာသည်ထားဘိဦး သူ့အလိုလို လှတယ်ထင်နေတာကို ဇွတ်ပြောင်းခိုင်းတယ် ဖြစ်နေဦးမည်..။ ဥပမာ ဒီလိုဗျာ( အဲ….စလာပြီ ဥပမာတဲ့…။ )
ထိုင်မသိမ်း အင်္ကျီနဲ့ သူ့ဟာသူလှတယ်ထင်နေတဲ့ တောသူမလေးကို ဘယ်ဇာတ်ကားထဲက ဘယ်သူလေးကတော့ ဘယ်ပုံလေးလှတာ…။ အဲဒိလိုပြောင်းဝတ်ကြည့်ပါလား ? သါားမပြောလေနဲ့….။ အဲဒိဇာတ်ကားကို အဲဒိတောသူမလေး ကြည့်ဖူးသည် ဖြစ်ဖြစ် မကြည့်ဖူးသည်ဖြစ်ဖြစ် သူများလှတာ စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူး…။ သူ့ကိုယ်သူ ဒီအတိုင်းလေကပဲ ပိုလှတယ်ထင်နေမှာပါ…။
အဲဒိလိုမျိုးပါ…။ ခေါက်ရိုးကျ ပုံစံခွက် ကျနေတဲ့ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ လူမျိုးတွေ ……အဲဒိလိုလူမျိုးတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်ကကော ……. ဘယ်လောက်အထိ သစ်လွင်လတ်ဆတ်မှာတဲ့လဲ….။ အပင်ပန်းခံပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်က တွေးကြည့်ရမှာ ၀န်လေးကုန်ပြီ… ။ တွေးနေကျအတိုင်း လုပ်နေမြဲအတိုင်းပဲ အဆင်ပြေနေသေးလေတော့ အပြောင်းအလဲ လုပ်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားဖူး….။ ကိုယ်နဲ့ မတူရင် မပေါင်းဘူး…။ ဒါဆိုရင်ဒါပဲ..။ လုပ်ထားလိုက်ကြတာက ………။ ဆန့်ကျင်ဘက်လေးများ ပြောမိရင် ရန်သူပဲ…။ ဆိုတော့ကာ………..
ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ် ကမ္ဘာကြီးနဲ့ လိုက်ပြီး ရင်ဘောင်တန်းမှာပါလိမ့်…။ ဒီပုံမျိုးနဲ့တော့ ရှေ့နောက်တောင်မှ ခြေလှမ်းညီအောင်လျှောက်ဖို့ ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး…….။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဖက်ဖက်က တိုးတက်လာတဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ အခြေအနေ မှာ ကိုယ်တွေကလည်း အစဉ်အလာတွေ အတွေးအခေါ်တွေ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ သင့်တာတွေ လိုက်မပြောင်းလဲသင့်ဖူးလား?
ငယ်ငယ်က ဆော့ ခဲ့တဲ့ အရုပ်တွေ ကြီးပြင်းလာတဲ့ အချိန်ထိ သိမ်းထားဖို့ သင့်ပါသလား …။ မဖြစ်သင့်ပါဘူးနော်…။ ဒါဆိုရင် ဘာတွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲကြရလေမလဲ…။ အဘယ်ထိ …အဘယ်မျှ ပြောင်းလဲပစ်ကြမလဲ…။ စဉ်းစားကြရအောင် ….။ အတွေးအခေါ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ ….. အစဉ်အလာတစ်ခုကို ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုတော့ အနဲဆုံး စံသတ်မှတ်ချက်ကတော့ ထားရပါလိမ့်ဦးမယ်…။ ဘယ်အရာကို စံသတ်မှတ်ချက်ထားမလဲ…။ အဲဒီတော့ကာ လူအတော်များများဟာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ စားဝတ်နေရေးနဲ့ လုံးထွေး နေကြရတဲ့သူတွေများပါတယ်…။ အေးချမ်းသက်သာစွာငွေရှာဖို့ အခြေအနေ မပေးပါဘူး…။ ပညာဘယ်လောက်ပဲ တတ်နေပါစေ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေနိုင်မဲ့သူက နဲပါးပါသေးတယ်..။ ဒီတော့ တစ်ကိုယ်ရည် ကိစ္စလေးတွေ သုံးသပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလားလို့…..။
၁။ ကိုယ့်အတွက် အပိုဖြစ်နေတာတွေ ရှာကြည့်ရအောင်လား…။
ကိုယ့်ကို ကိုယ်တော့ အပိုဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စ မရှိဘူးလို့ ထင်ကြမှာပဲ…။ တစ်ကယ်တမ်းပြန်တွက်ကြည့်ရင် အပိုဖြစ်နေတာကို ဒီလိုလေး ရှာကြည့်ရအောင်….။
(a)	သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်နေ့ ဘယ်နှစ်နာရီလောက် စကားပြောဖြစ်သလဲ…။
(b)	TV …/ VDO တစ်နေ့ ဘယ်နှစ်နာရီလောက် ကြည့်ဖြစ်နေသလဲ
(c)	ချက်တင်ထိုင်နေတဲ့ အချိန်တွေ များနေသလား
(d)	သီချင်းနားထောင်နေတဲ့ အချိန်တွေကကော……….
(e)	တစိကယ် ဗိုက်မဆာပဲနဲ့ အဆာပြေ စားနေတဲ့ သွားရည်စာဖို့ တစ်နေ့ ဘယ်လောက်ဖိုးလောက်ရှိမလဲ
(f)	သူငယ်ချင်း/မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ အားနာလို့ …..။မကောင်းတတ်လို့ ……..။ လက်မထောင်ချင်လို့ ဒိုင်ခံ ကိုယ်က ထုတ်ရှင်းနေတဲ့ ငွေတစ်နေ့ ဘယ်လောက်များရှိနေပြီလဲ
(g)	ဈေးဝယ်ရင်း အကြွေ မရှိလို့ ဆိုပြီး မလိုအပ်တဲ့ လက်ငင်း အသုံးမလိုသေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အားနာပါးနာနဲ့ တစ်နေ့ ဘယ်လောက်များ အအမ်း ခံနေရသလဲ…။
(h)	လက်သည်းခြေသည်းတွေ အရောင်အမျိုးမျိုး ထားဆိုနေသေးလား
(i)	ဖိနပ်ကော ဘယ်နှစ်ရံ အပို ဖြစ်နေသလဲ…။
(j)	တစ်လတစ်လ မင်္ဂလာဆောင် ဘယ်နှစ်ဆောင်လောက် လိုက်ပြီးလက်ဖွဲ့ နေရသလဲ…။ နေ၀န်းနီကတော့ မတတ်နိုင်ရင်မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ထားလိုက်တယ်…။ ဟုတ်တယ်လေ…။ ကိုယ်တစ်ယောက်မသွားလို့ အဲဒိပွဲ ပျက်သွားမှာမှမဟုတ်တာ…။ အဲဒိအတွက် သိပ်ကြောင့်ကြစိတ်မထားဘူး…။
မေပေါင် မှ ဘီနို ၊ မေပေါင် မှ ဗီနို …
သယ်ချင်းတွေ နဲ့ ဘီယာဆိုင်မှာ ဆုံမှဘဲ စပီတွေ တော့ခ်ဖြစ်တယ်
တီဗီ ဗီဒီယို ကြည့်ဖို့ အချိန်မရှိတာ အမှန်ပါ
ချက်တင်းထိုင်တဲ့အချိန်ရယ်လို့ မရှိတော့တာကြာပေါ့ ၊ ဂေဇက်မှာဘဲ ပျော်နေလို့ 
ဘီယာဆိုင် ၊ လဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ထဲ့အချိန် သူရို့ ဖွင့်မှ နားထောင်ဖြစ်တော့တယ်
သူရို့ တွေ နဲ့ ဆုံတိုင်းဘဲ ၊ ကိုယ်က ထုတ်ရှင်းခဲ့တယ် ၊ ကြာတော့ တွေ့ ရမှာ ကြာက်ကြောက်
အကြွေအစား တခြားဟာ အမ်းတာ သိပ်မကြုံရတော့ဘူး
လက်သည်းခြေသည်း တစ်လတစ်ခါတော့ ဈေးထဲက ပုဏ္ဏားတွေ ဆီမှာ သွားညှပ်တယ် ၊ ကိုယ့်ဓါးနဲ့ ကို
ဖိနပ်တစ်ရံ သုံးလ ဘဲ
မောင်ဂလာဆင် က ရင်းနှီးမှုအပေါ်မူတည် ပြီး အာကေ ဘဲ ဖွဲ့ တော့ ၊ ကြားဖူးနားဝ ရှိသူတွေ ခဏခဏ လာဖိတ်ကြတယ် ။
လူသားဆိုတာ ဒီလိုပဲ..။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ..လှုပ်ရှားရုံးကန်နေရတာပါ..။ ဒီကံ(အလုပ်)တွေပေါ်မူတည်ပြီး.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း.. တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာတာပါ…။
(h) လက်သည်းခြေသည်းတွေ အရောင်အမျိုးမျိုး ထားဆိုနေသူတွေရှိလို့.. လက်သည်းဆိုးဆေးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေပေါ်တယ်..။
(i) ဖိနပ်အရံအပိုတွေဝယ်လို့ ဖိနပ်တွေရောင်းရပြီး ဖိနပ်လုပ်ငန်းကြီးလည်ပါတ်လာတယ်..။ အဲဒီလိုပေါ့..။
ဘာမှမလုပ်.. ရှောင်ပြေးပြီး.. ချောင်မှာထိုင်.. တခြားသူတွေလုပ်ကိုင်ထားတဲ့..ငွေနဲ့အရင်းအမြစ်တွေကို ခံစား/စားသုံးနေသူတွေထက်မြတ်တဲ့..ကောင်းတဲ့.. အလုပ်တွေလို့ပြောချင်တာပါပဲ..။
အောက်ကသတင်းကြည့်ပါ. သုံးစွဲဖြုန်းတီးနှုန်းတက်လာရင်.. စီးပွားရေးကောင်းလာတယ်ခေါ်ကြတယ်…။ ယူအက်စ်က.. ဖြုန်းအားကောင်းလာလို့.. ဥပဒေပြုသူ..အစိုးရ ပျော်နေလေရဲ့…။
Americans spent more on electronics, clothing, as retail sales rise for sixth straight month
The higher sales of furniture and autos suggested that consumers made more big purchases in November. So-called “core” sales, which exclude the volatile categories of autos, gasoline and building materials, rose for an 11th straight month.
အပေါင်းအသင်းများတယ်ဆိုတာ လူရာဝင်တယ်လို့ပဲ ပြောရပါမယ်..
မိန်းကလေးတွေ ခြေသည်း၊ လက်သည်းနီတွေ ပြောင်းဆိုးကြတယ်ဆိုတာမှာ သူတို့တွေအတွက် အကျိုးအမြတ်က ရင်းလိုက်ရတာထက်များလို့ ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်.. နဂိုရှိရင်းစွဲအလှကို အရောင်တင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် လှပမှုကို သူတို့ ပိုင်ဆိုင်ရတယ်၊ အဲဒီအလှအပကပဲ သူတို့ဘ၀တွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လေ.. နောက်တစ်ချက်၊ မင်္ဂလာဆောင်တွေ ကိုယ်မသွားလဲ သူတို့ပွဲမပျက်သွားနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်သွားလိုက်တဲ့အတွက် သူတို့ပွဲလေး၊ ပွဲဆိုတာထက် လူတွေကို ကြေငြာမောင်းခတ်တဲ့ အနေနဲ့ ကျွေးမွေးပြုစုပြီး အသိအမှတ်ပြုခိုင်းတာကို သွားပြီး အသိအမှတ်ပြုပေးတယ်ဆိုတာလည်း လူသားပီသခြင်းတစ်ရပ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုမှာ အဲလိုအခမ်းအနားတွေကို တက်ရောက်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့ လူမှုပါတ်ဝန်းကျင်ဘ၀မှာ နွေးထွေးမှုရှိတာကို ဖော်ပြရာလဲရောက်ပါတယ်။ တစ်ခြားနေရာတွေမှာ ဖာသိဖာသာ နေချင်နေမယ်ပေါ့။ နောက်တစ်ခု၊ ဖိနနပ်အပိုတွေ ဘယ်နှစ်ရံရှိလဲဆိုတာထက် ဘယ်လိုဖိနပ်မျိုးတွေ ရှိနေလဲဆိုတာက ပိုဆိုင်မယ်ထင်တယ်။ ပြောရမယ်ဆို ဘုရားသွား၊ သီလစောင့်ဖို့ ဖိနပ်ပါးအဖြူလေး၊ မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ၀တ်လို့လှမယ့် ပုံတော်ဖိနပ်လေး၊ အနောက်တိုင်း ဧည့်ခံပွဲတွေတက်ဖို့ ဒေါက်ဖိနပ် မြင့်မြင့်လေး၊ အလုပ်မှာ ဘောင်းဘီနဲ့ဝတ်ဖို့ ရှူးဖိနပ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်စီးဖို့ ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ အိမ်ထဲမှာစီးဖို့ ခြေစွပ်ဖိနပ်၊ ရေချိုးရင်စီးဖို့ ရော်ဘာဖိနပ် အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ သင့်တော်ရာနေရာတွေမှာ သင့်တော်သလိုစီးဖို့ လိုအပ်တယ်ထင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြင်ပ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေဟာလည်း အဲဒီလူရဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို ဖော်ပြရာလဲရောက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ နေစဉ်တော့ ဒီလို အပြုအမူတွေက အမြင်မတော်၊ ထော်လော်ကန့်လန့်ဖြစ်စရာရှိပေမယ့် သူများလူမျိုးတွေနဲ့ နေထိုင်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပါ နိမ့်ကျနေသလို ဖြစ်စေပါတယ်။ တော်ရာ၊ တော်ရာတော့ ၀တ်စားဆင်ယင်သမှု ပြုကြရမှာပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ပေးဖြစ်လားဆိုတာကတော့ ပေးကိုပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း နေလို့လဲ မဖြစ်ဘူးလို့ မဆိုပါဘူး။ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ တစ်ယောက်တည်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်အထီးကျန်ဆန်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီဝေဒနာက ခံစားရ အတော်ကို ခက်တာလား… ကိုနေ၀န်းနီမေးထားတာတွေကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဥခွံသေးသေးလေးထဲကနေ ဖောက်ထွက်ပြီးတော့ လောကကြီးကို အကျယ်ကြီးမြင်ရအောင် ကြည့်လိုက်ကြရအောင်စို့လား..
ဟေ့….. ဖောက်ထွက်မယ်ကွ…. :cool: ဆွဲထုတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ…။